Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny hosoka | Law Firms Dubai
Ny hany ilainao momba ny hosoka
Tsy olana momba ny heloka be vava fotsiny ny hosoka fa resaka sivily koa. Nenjehina ny halatra heloka bevava ary mety ho fotoana am-ponja ny valim-pifidianana. Ny tanjon'ny fitaka dia ny mamitaka olona na antokon'olona vola na vidiny, fa indraindray ny hosoka amin'ny heloka bevava koa dia tafiditra amin'ny fahazoana tombony amin'ny vola nangalatra na vidiny.
Inona ny atao hoe Fitaka? Famaritana ara-dalàna
mikasa hamitaka na hanambaka olona iray
Ny hosoka dia midika fisehoana sandoka amin'ny zava-misy na dia ny fampiasana ny teny na ny fitondran-tena. Heverina koa fa ny hosoka dia fiampangana mamitaka ary manafina ny zava-misy izay tokony hambara. Ny fitaka dia mamitaka am-pahamendrehana mba hahazoana tombony na tombontsoa tsy ara-dalàna na tsia.
Avy amin'ny karazany maro ny fisolokiana, ny sasany toa ny halatra amin'ny fandainga sandoka dia fahita ary ny hafa dia lasibatra ho an'ny traboina toy ny hosoka amin'ny banky, ny fiantohana amin'ny fiantohana, na fanadinoana. Raha miovaova ny fangaro sandoka, ny singa iray amin'ny fanamelohana olona mpamitaka dia ahitana:
Ny tanjona hamitahana na hanambaka olona iray amin'ny alàlan'ny fanehoana lainga diso, na
Tanjona handresena traboina hamoaka fananana nefa miankina amin'ny fisoloan'ireo nahavanon-doza.
Fahatakarana ny halatra sy hosoka
Inona ny fanaovana hosoka
Ny fangalarana ny maha-izy anao dia tsy zava-baovao. Izany dia amin'ny fotoana mitovy aminy. Raha ny tena marina, misy tantara miforona Wild West andro tamin'ny famonoana olona namono olona ary naka ny mombamomba ireo lasibatra, manampy azy ireo hisoroka ny lalàna.
Ankehitriny, manamora ny teknolojia ho mora vitan'ny mpanao heloka bevava ny fanaovana halatra mombamomba azy ireo. Fijirihana fikambanana tsy miankina sy governemanta ary mangalatra mombamomba ny olona an-tapitrisany. Avy eo izy ireo dia nanao heloka bevava tamin'ny fampahalalana nangalarina. Ny mpamono dia mety mangalatra fampahalalana manokana amin'ny fomba maro samihafa:
phishing: Ireo niharam-boina naniry handefasana mailaka amin'ny mpiasam-panjakana ary mikendry ny hisintona ilay mpandray andraikitra hanao hetsika mety hanomezana vonoan'ireo mpanao heloka bevava ny mombamomba azy manokana.
malware: Mamitaka ireo niharam-boina tamin'ny fisintonana rindrambaiko maimaimpoana amin'ny Internet ny mpisoloky. Na izany aza, tsy tsapan'ireo niharam-boina fa ny rindrambaiko maimaim-poana dia mety misy ny viriosy maloto izay manome ireo olon-dratsy miditra amin'ny solosaina na tambajotra.
Paikady hafa: Fomba roa tsotra mety hahafahan'ireo mpanao heloka bevava amin'ny halatra moto amin'ny alàlan'ny fangalarana mailaka sy ny fanodinana fako. Io dia ahafahana miditra amin'ny antontan-taratasy izay azo ampiasaina amin'ny halatra olona.
Inona no atao hoe hosoka?
Ny halatra sy ny hosoka no ifandraisany amin'io heloka bevava io ihany. Na izany aza, ny iray dia afaka manao ny raharaha fa ny hosoka no tena fampiasa amin'ny mombamomba ireo nangalatra hahazoana tombontsoa amin'ny heloka bevava. Ny lisitra lava momba ny heloka bevava amin'ny fanaovana hosoka dia misy:
Ny hosoka amin'ny carte de crédit: Tafiditra amin'izany ny fampiasana nomerao karatra fiantanan'ny olona iray mba hanaovana fividian-hosoka.
Fisolokiana momba ny asa na fananana hetra: Tafiditra amin'izany ny fampiasana nomerao fiarovana ara-tsosialy sy fampahalalana manokana an'ny olona mba hahazoana asa amin'ny famerenam-bola sy ny fiverenan'ny hetra.
Banky hosoka: Mampiasa ny mombamomba ny olona iray amin'ny fandraisana ny kaonty ara-bola amin'ny olona na fikambanana amin'ny fanokafana kaonty vaovao amin'ny anaran'ny olon-kafa.
Finday na fitaovana. Sokafy ny kaonty finday na fampiasa amin'ny mombamomba ny olon-kafa.
Trosa na mampindrana vola: Omisambotra trosa na manofa amin'ny fampahalalana ny mombamomba ny olon-kafa.
Antontan-taratasy na tombontsoa azo avy amin'ny governemanta: Mampiasa ny mombamomba ny olon-kafa mba hahazoana tombontsoa avy amin'ny governemanta.
Ny lalàna momba ny halatra amin'ny maha-izy anao manerana an'i UAE dia manarona fihetsika isan-karazany. Na izany aza, ny fatrany dia ny heloka bevava amin'ny fampahafantarana mombamomba ny olona iray tsy misy fanekena na alalana ary ho an'ny fahazoana tombony. Maro ny fomba mety hitranga ny halatra maha-izy azy:
Misy olona mangalatra poketra na kitapom-bola hafa mba hahazoana fampahalalana ho an'ny tena manokana sy carte de crédit
Mahalala olona iray mandatsaka karatra, haka azy ary manapa-kevitra ny hampiasa azy io hividianana zavatra.
Nisy olona nangalatra ny fahazoan-dàlana nataon'ny olona iray ary natolony ny polisy raha toa ka voataona haingana izy ireo na rehefa voasambotra.
Nisy olona mandefa mailaka mailaka ho mpikambana amin'ny IRS ary mibaiko anao handefa ny mombamomba anao manokana mba harahina.
Misy olona mahazo fidirana amin'ny kaontinao mailaka ary mahita fampahalalana manokana amin'ny mombamomba anao.
Nisy olona nangalatra ny mailaka ary nandeha nitady fako nitady volavolan-dalàna na fanambarana izay mety misy fampahalalana manokana ary koa ny laharan'ny kaonty.
"Ny hosoka dia amboary ny fifanakalozana rehetra"
Ity resaka ara-dalàna taloha ity dia manondro fa na aiza na aiza misy fisolokiana dia tsy lavitra ny hetsika ara-dalàna. Rehefa misarika ny lohany ratsy toetra ny hosoka, misy ny safidy ara-dalàna, na tsy misy lalàna na raharaha ao amin'ny lalàna iraisana ny lalàna manokana. Tsy ara-dalàna mihitsy ny hiombon-kevitra amin'ny fisolokiana na fitondran-tena ratsy, tsy azo atao ny manatanteraka an-tsokosoko feno hosoka. Ankoatr'izay, ny porofo momba ny hosoka dia ekena hatrany amin'ny fitsarana, na izany karazana porofo izany aza dia tsy ekena amin'ny toe-javatra sasany.
Mpisolovava amin'ny varotra
Tsy manavakavaka ny lalàna rehefa mikasika ny olona, ​​koa tsy tokony ho toy izany ianao. Raha sendra manana hosoka amin'ny endriny hafa ianao dia tokony hifandray amin'ny mpisolovava iray mba hahafantarana ny fiantraikan'ilay fisolokiana ny zonao sy ny adidinao.
Amin'ny heviny malalaka, ny hosoka no isa voalohany amin'ireo tsena malalaka. Any UAE, ny hosoka dia samy sazy famonoana sivily na heloka bevava. Raha misy olon-kafa manao hosoka aminao, mety tsy ho diso aminao izany fa heloka bevava amin'ny fanjakana.
Raha miatrika tranga hosoka ianao dia afaka mandray andraikitra ara-dalàna foana, na dia tsy misy lalàna manokana mifototra amin'ny toe-javatra manokana aza. Ny fisolokiana fandraharahana dia misy karazana telo, izay fisolokiana amin'ny fikajiana, fisolokiana amin'ny famonoana olona. ary ny fanaovana hosoka ho toy ny lalàna.
Ny fisolokiana ao amin'ny fakan-dry zareo, izay fantatra ihany koa hoe mitrosa dia miseho rehefa mamitaka ny tena fepetra amin'ny fifanarahana ary zanakalahy noho ny finiavana hamitaka. Raha diso hevitra na zava-misy lehibe ilay voampanga, noho ny fikasa-mamitaka anao, ary vokatr'izany dia nanao fiheverana tamim-pahatsorana ianao. Antsoina hoe hosoka amin'ny fatiantoka izany. Mba hamaritana mazava azy io, dia tsy maintsy nisy ny lainga momba ny zavatra lehibe avy amin'ilay voampanga, saingy vetivety dia tsy nino ny lainga toy izany ianao.
Ny hosoka amin'ny famonoana dia rehefa tsy mifono tsy marina ny fifandraisan'ny antoko amin'ny fifanarahana ary manosika zavatra tsy hataonao mahazatra. Raha misy olona mangataka autografika, fa manohy manao taratasy fampanantenana eo akaikin'ny autographo, dia antsoina hoe hosoka amin'ny famonoana azy izy io.
Heloka bevava sy heloka bevava
Manam-pahaizana voamarina sy ny fankatoavana tanteraka